केही लिबर्टेरियन भनाइहरु - ४ ~ Surath Giri's Blog
केही लिबर्टेरियन भनाइहरु - ४
June 23, 2011 Surath Giri
प्रत्येक भलादमी मान्छे आफ्नो सरकारदेखी लज्जित भैराखेको हुन्छ । -H.L. Mencken
स्वतन्त्रता कुनै राजनैतीक उदेश्य प्राप्त गर्ने माध्यम नभएर आफैमा सबै भन्दा ठुलो राजनैतीक उदेश्य हो । -H.L. Mencken
यदि कुनै राश्ट्रले स्वतन्त्रता भन्दा अरुनै कुरालाई बढी महत्व दिन्छ भने उस्ले स्वतन्त्रता गुमाउने निश्चित छा । अझ दु:खको कुरा त के हो भने उस्ले बढी महत्व दिने कुरा पैसा अथवा आराम हो भने ती कुराहरु पनि गुमाउछ । -Somerset Maugham
स्वतन्त्रता मानिसहरुको मनमा बस्ने कुरा हो । जब त्यहाँ यसको मृत्‍यु हुन्छ , कुनै संबिधान , कुनै कानून वा कुनै अदालतले यसलाई बचाउन सक्दैन । -Justice Learned Hand
भेडाहरुको राष्ट्रले ब्वासोहरुको सरकारबाहेक केही पाउदैन । -Edward R. Murrow
कुनै नागरिकलाई ऊ आफैंबाट बचाउनु न त सरकारको दायित्व हो न त कानूनी प्रणालीकै । -Casey Percell
अपराधीहरुबाट नागरिकहरुलाई बचाउनका लागि सरकार र सरकारबाट नागरिकहरुलाई बचाउनका लागि संबिधान बनाइएको हो । -Ayn Rand
पहिले उनीहरु यहुदीहरुलाई लिन आए तर मैले केही गरिन, किनकी म यहुदी होईन । त्यसपछी उनीहरु समाजवादीहरुलाई लिन आए तर मैले केही गरिन , किनकी म समाजवादी होईन । त्यसपछी उनीहरु क्याथोलिकहरुलाई लिन आए तर पनि मैले केही गरिन किनकी म क्याथोलिक होईन । अन्त्यमा उनीहरु मलाई लिन आए , तर तेसबेला सम्ममा मलाई मद्त गर्न आउनलाई कोहि बाँकी नै थिएन । -Pastor Father Niemoller (1946)
राजनीतिलाई पेशा स्वरुप अगांल्ने अनी इमान्दार पनि रहने -असम्भव कुरा । -Ambrose Gwinett Bierce
जब कुनै एउटा ब्यक्तिको जिवनमा ठुलो असर पार्ने कुराहरुको निर्णय अरु नै कसैले गरिराखेको छ भने त्यो निर्णय चाहे राजाले गरोस या चाहे तानाशाहले अथवा समाजले नै गरोस केही फरक पर्दैन । -James Taggart (1992)
Libertarian Quotes / Nepali / Translated